Ehime Tangerine -China Yixinhe Ukuhweba
Ehime Mandarin orange has ukuma round, amnyama orange umbala, uwoyela cell mncane, abushelelezi, eyigeza, kulula ikhasi. Ushukela 15 °, acid 0.5 ° ngezansi, akukho zenuzi, ukunambitha slag esihle, amakha futhi kuqabule, ukunambitheka kakhulu. Amelana isitoreji, ukumelana ezibandayo, isivuno esihle, imiphumela yezinhlamvu, kuyinto izinhlobo ethembisa kakhulu ekuqaleni ukukhula zezithelo ezisawolintshi. Ukunciphisa acid ekuseni, Ehime ezisawolintshi Ekupheleni kukaNovemba babe ukunambitheka engcono, kodwa phakathi no-November kuya emakethe. Ehime ezisawolintshi kanye Nankou abavuthiwe ...
Ehime Mandarin orange has ukuma round, amnyama orange umbala, uwoyela cell mncane, abushelelezi, eyigeza, kulula ikhasi. Ushukela 15 °, acid 0.5 ° ngezansi, akukho zenuzi, ukunambitha slag esihle, amakha futhi kuqabule, ukunambitheka kakhulu. Amelana isitoreji, ukumelana ezibandayo, isivuno esihle, imiphumela yezinhlamvu, kuyinto izinhlobo ethembisa kakhulu ekuqaleni ukukhula zezithelo ezisawolintshi.
Ukunciphisa acid ekuseni, Ehime ezisawolintshi Ekupheleni kukaNovemba babe ukunambitheka engcono, kodwa phakathi no-November kuya emakethe. Ehime ezisawolintshi kanye Nankou abavuthiwe ngaleso sikhathi, kodwa Ehime ezisawolintshi has ngaphezulu slag ithenda, futhi ayinaso isikhumba elintantayo, unqobe ukushiyeka Ukushoda kwamanzi lo Nankou sika, Ehime iyona engcono esikhundleni izinhlobonhlobo Nankou, efanelekayo yonyaka isilinganiso lokushisa 16C ° ukutshalwa , liphinde kwezinhlobo ekahle amaphethelo angasenyakatho aleli ezisawolintshi.
Ehime Citrus kuyinto zivuthiwe. Isihlobo elivamile amawolintshi oxubile abavuthiwe Enkathini ecishe ibe ngenyanga noma njalo. Evumayo ukugcwalisa isikhathi sikhala wemakethe ezisawolintshi. sokuvuna Izithelo ngokuvumelana izithelo zohlobo lukalamula ukuvuthwa, sebenzisa, emakethe udinga ukuthola isikhathi sokuvuna. lapho Imvula izithelo noodle ezomile hhayi ukukhetha izithelo. abasebenzi Izithelo kumele afake amagilavu, nge round izithelo umsiki ukusika izithelo izithelo Isiqu ndawonye, ​​bese usika isithelo pedicle, ngomusa. Ngo-oda kusuka ngaphandle ngaphakathi, kusukela phezulu kuya phansi ukukhetha izithelo. Dinga lonke ugange izithelo esitsheni bushelelezi, bavuna izithelo kumele ngokushesha uyiswa emkhakheni isembozo noma isitoreji. Gwema elangeni nasemvuleni.
Olandelayo: Isithelo segilebhisi
China Ehim e-Tangerine
Ehime Tangerine Isitolo esidayisa yonke impahla
Fresh Cirtus Izithelo
Mandarin Orange Inani
Mandarin Orange Yamadivayisi
Isitolo esidayisa yonke impahla Ehime Tangerine